I-Semalt ichaza indlela yokuvimbela amanye amazwe kusuka ekufinyeleleni indawo yakho
Uma ungumnikazi wewebhusayithi noma ibhulogi, kufanele wazi kahle ukuthi kufinyeleleke kuwo wonke amazwe ngokuzenzakalelayo. Izingosi ezihlukahlukene azifaneleki kubantu abakwamanye amazwe, ngakho akufanele silindele ukuhamba nokuhamba okubalulekile kuzo. Isibonelo, uma unencwadi yokubhuka yendawo futhi imakethe yakho ngabantu bezwe lakini, awudingi ukuvumela amanye amazwe ukuba achithe umkhawulokudonsa wesiphakeli sakho.
Kunezizathu ezihlukahlukene zokuthi kungani kuvimbela ukungena kumazwe athile kuyadingeka. Isizathu esingcono kakhulu ukuthi isayithi lakho lizobamba abantu bendawo kuphela futhi alinandaba nabangaphandle, ngakho ungayeka i-Google, i-Bing, ne-Yahoo ekufakwe ohlwini lwamasayithi akho kulawo mazwe. Lapha, uRoss Barber, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, uxoxe ngezindlela ezivame kakhulu ukuvimbela amazwe:
1. Ifayela le-.htaccess
Uma ungumqambi wewebhu, ungase ukwazi ukuthi ukuhlela ifayela le-.htaccess kungazuzisa isayithi lakho ngezindlela eziningi. Abahlekisayo nabangena ogaxekile abanomthetho basebenzise amaproxi kanye nemifula yebhola ukwenza imisebenzi yabo. Nokho, i-webmaster, ingavimbela amakheli we-IP asolisayo ukuze abaduni bangakwazi ukwenza izinto ezingenasisindo ku-intanethi. Ifayela lakho le-.htaccess cishe likhule libe yizinkulungwane zemigqa yombhalo uma uvimbela amazwe angafuneki. Kulokhu, udinga nje ukubeka ikhodi ethile kwifayela le-.htaccess, futhi ikhodi yilezi:
I-oda Lungile, Vumela
Yeka kusuka ku-1.1.1.1
Yeka kusuka ku-2.2.2.2
Yeka kusuka ku 3.3.3.3
2. Sebenzisa inkampani yokubamba ngezinsizakalo zokuvimbela
Ungasebenzisa isevisi yokusingatha enikeza ngezinsizakalo ezahlukene zokuvimbela izwe. I-GoDaddy yiyona kuphela inkampani ebamba iqhaza enikeza le nsizakalo ngezintengo ezifanele ngenyanga.
3. I-Metal Metal
Insimbi engenalutho, ebizwa nangokuthi i-VPS, ngumshini ongayisebenzisa ukuvimba amazwe angafuneki. Kusukela ku-firewall yesofthiwe kuya kwesevisi yokubamba kanye nephaneli yokulawula, insimbi engenalutho iletha konke ezandleni zakho. Izinketho ezintathu ezibonakalayo ezingenalutho ongahamba nazo yi-DigitalOcean Droplet, Rackspace, ne-InMotionHosting. Google amagama abo bese uhlola imininingwane.
4. Sebenzisa ama-Blogger e-cPanel IP
Inkampani yokusingatha oyisebenzisayo ingakusiza ukuvimba amakheli e-IP ngephaneli lokulawula. Ungabathinta ngqo bese ubacela ukuba bafake i-IP blocker ku-cPanel yakho ukuze ukwazi ukuvimba ama-IP angamazwe ongafuni ukuthola kuwo.
5. Ukuvinjelwa kweGeoblocking noma iGeo
Ukuvinjelwa kwe-Geo kusenza sikhethe amazwe esiwafunayo ukukhawulela ukufinyelela. Ngokulungisa i-whitelist noma uhlu lwabantu abamnyama kulawo mazwe, ungakwazi ukulawula kalula ukulethwa kokuqukethwe kwakho kwewebhu nge-Amazon CloudFront. U-Akamai ungenye indlela ongayenza ngayo. Uma unayo i-CDN enikeza okuqukethwe kwakho kuwebhu, kufanele ukhathazeke ngokusetshenziswa okungenasici kwe-bandwidth yakho. Qaphela amasevisi we-Geoblocking bese uthola izinto zenziwe ngokuphelele.
6. Ama-Apache Modules
Uma unamamojula we-Apache, awudingi ukugcwalisa ifayela le-.htaccess ngezinqwaba ze-IPs. I-MaxMind isinika imininingwane yamahhala esingayisebenzisa ukuze sivimbele i-IP engadingeki noma esolisayo. I-GeoLite2 yayo iyindlela engcono kakhulu yokuhamba nayo futhi ayikho izindleko.